General - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 5)
Kioban dulce de leche alfajores, ho an'ireo manana nify mamy
Ny Kiobà alfajores dia iray amin'ireo fahafinaretana gastronomic maro izay azon'ny sakafo matsiro amin'ity firenena Karaiba ity azontsika.
Toy izany no anaovana ny vary kiobanina tena izy
Iray amin'ireo lovia miavaka indrindra amin'ny gastronomy Kiobàna, angamba noho ny fahatsorany, ny vary kiobanina, somary tsy mitovy amin'ny vita any Espana.
Cherna lasopy, fomba matsiro hanombohana sakafo
Ny trondro dia mitana andraikitra lehibe amin'ny gastronomy Kiobàna ary iray amin'ireo fanomanana maro dia ny lasopy cherna matsiro.
Malecones malaza eto amin'izao tontolo izao
Androany dia hitsidika ranomasina tsara tarehy eran'izao tontolo izao isika. Andao atomboka ny fitsangatsanganana amin'ny Maltese Scenic Boardwalk, miorina amin'ny ...
Kilt, vokatra nentim-paharazana Skotika tsy mety amin'ny rehetra
Ny Kilt dia iray amin'ireo vokatra nentim-paharazana, tsy avy any Glasgow ihany fa hatrany amin'ny faritra rehetra any Ekosy, na dia vokatra tsy mety amin'ny rehetra aza izy io.
Turaida, iray amin'ireo tranon'ny medieval any Letonia
Tranon'i Turaida, tranombakoka ary tahiry voajanahary akaikin'i Riga any Latvia
Synagogue malaza eto amin'izao tontolo izao
Androany dia hitsidika sinagoga malaza eto amin'izao tontolo izao isika. Andao atomboka amin'ny fanonona ny Synagoga Lehibe ao Sydney, sinagoga mipetraka ...
Ny ady sy ny ady tantanan'ny fanjakana, ny fifanandrinana mifaninana any Azia sy Eropa, ary ny loza voajanahary sy ny voina maro, azontsika atao ...
Ireo mpiara-monina ao Washington DC
Androany isika dia hitsidika ny sasany amin'ireo faritry ny tandindona indrindra ao an-tanànan'i Washington DC Andao hanomboka ny fitsidihantsika any ...
Obelisks malaza eto amin'izao tontolo izao
Androany isika dia hahita ny sasany amin'ireo obeliska lehibe indrindra eto an-tany. Andao hanomboka ny diantsika any Etazonia, manokana ...
Chandipur, ny morontsiraka izay manjavona isan'andro
Chandipur dia torapasika any India izay, indroa isan'andro ary noho ny fihenan'ny onja, ny rano dia nihena hatramin'ny 5 kilometatra, namela ny fanambanin-dranomasina tazana tanteraka.
Araka ny angano, ny fanoratana arabo dia natsangana niaraka tamina litera sy rahona, etona tena ilaina, izay mampita hafatra hafakely….
Mozika mahazatra an'i Panama
Firenena mozika be i Panama, firenena iray any Amerika Afovoany izay misongadina amin'ny gadona tropikaly, Afro-Karaiba, tanàn-dehibe, ambanivohitra ...
Inona no fantatrao momba ny nahandro Koreana Tavaratra?
Korea Avaratra dia manana tolo-kevitra momba ny gastronomika maro karazana izay mety hahagaga tokoa.
Ny tsenan'i Frankfurt
Ny fitsidihana ireo tsena any Frankfurt dia tsy maintsy atao rehefa miantsena eto amin'ity tanàna ity.
Ny lalan'ny Isabel La Católica ao Castilla y León
Tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa, ny fantsona fahitalavitra Espaniôla TVE dia nanao première 'Isabel', andiany nahomby tokoa miorina amin'ny ...
Paris amin'ny tsangambato 6
Làlan'ny fizahantany mamakivaky an'i Paris mitsidika tsangambato malaza 6 an'ny tanànan'ny Seine
Aiza no hihinana ny frankfurter tsara indrindra
Gaga ny rehetra i Frankfurt satria manana safidy hafa tsy tapaka tsy tapaka tsy mihinana na inona na inona tsiro sy ny paosinao.
Amin'ity fotoana ity dia hiresaka momba ny sakafo Kantonika isika, ny gastronomika izay avy amin'ny faritanin'i Canton, atsimon'ny ...
Corset: Akanjo frantsay mahazatra
Raha tsy maintsy miresaka momba ny iray amin'ireo akanjo mahazatra any Frantsa isika dia tsy maintsy miresaka momba ny tranga ...
Ny lova mifono mistery an'ny Nazcas
Ao amin'ny tany efitra Peroviana ao amin'ny Pampas de Jumana no ahitantsika ny iray amin'ireo enigma liana indrindra amin'ny planeta: Nazca.
Montauk, toerana miala sasatra any Long Island
Montauk, miorina eo amin'ny tendron'ny Long Island, dia toerana lavorary handosirana ny fahateren'i New York, ary hijery ny sasany amin'ireo toerana voajanahary tsara tarehy indrindra ao amin'ny fanjakana.
Inona no hitsidika an'i Alabama?
Androany dia handeha hitsangatsangana any Alabama isika, fanjakana iray any amin'ny faritra atsimon'i Etazonia. Andao hanomboka…
Amin'ny tranga mitady toerana voajanahary any Amerika Afovoany, iray amin'ireo solontenan'ny ankamaroan'ny tranga El ...
Dura Europos, ny sinagoga sy fiangonana tranainy indrindra eto an-tany
Dura Europos, any Syria
Hitanay tao Tokyo 'ny arabe yakitori'
Raha iray amin'ireo mpitsangatsangana maniry hiala ny fizaran-tany nentim-paharazana ho an'ny mpizahatany ianao, mialà amin'ny afovoany ary tadiavo ny zorony ...
Zava-maniry palmie manandanja an'izao tontolo izao
Amin'ity indray mitoraka ity dia hitsidika ala-palma manan-danja eto amin'izao tontolo izao isika. Andao atomboka amin'ny Palmeral de Elche, izay ...
Ny tanànan'i Nantes dia misy tranobe mahaliana toy ny Katedraly Saint Peter sy Saint Paul, tsangambato ara-pivavahana amin'ny fomba Gothic izay misy ny fasan'i Francis II ihany koa.
Fomba amam-panao Piura
Piura dia iray amin'ny toerana itodiana indrindra any Peroa, any amin'ny faritra avaratry ny firenena manoloana ny morontsiraka.
Vondrona aborigène any Afrika
Ny Bushmen an'ny tany efitra Kalahari, raha ny filazan'ny mpahay tantara sy arkeolojika, ny maha-zava-dehibe azy ireo dia ny itovizany amin'ny génétique voalohany amin'ireo mpifindra monina afrikanina voalohany.
Farihy manan-danja any Amerika afovoany
Ny farihin'i Ilopango dia eo anelanelan'ny departemantan'i Cuscatlán sy San Salvador, manana volkano fiaviana ary mampindrana ny tenany amin'ny fanaovana spaoro rano
Rio Bravo: renirano eo anelanelan'i Mexico sy Etazonia
Ny Rio Bravo na antsoina koa hoe Rio Bravo del Norte any Mexico ary any Etazonia toa an'i Rio Grande, dia zana-trondro iray izay manana halavirana 3.034 kilometatra
Landscape an'i Venezoela
Venezoela dia firenena manintona mpizahatany lehibe mifandraika amin'ny natiorany, izany no antony an-jatony ny velaran-tany mety ho fantatra
Fomba amam-panao any Honduras
Honduras dia firenena iray izay mifandraika amin'ny fomban-drazany dia manana endrika tena mahafinaritra
Tsy manana fomba tokana an-tanàn-dehibe i Frantsa ankehitriny, na dia azo lazaina ho vitsivitsy aza ...
Ny teatra romana dia fananganana mahazatra namboarin'ny Empira Romana. Ny tanjon'ireny teatra ireny dia ny hanompo ...
Volkano any Amerika Afovoany
Amerika Afovoany dia miorina amin'ny faritra heverina ho misy hetsika volkano midadasika, izay fantatra amin'ny anarana hoe Arc Volcanic ...
Portugal sy ny moron-dranomasina, toeran-kaleha
Eo anelanelan'ny volana Jona sy septambra any Portugal dia fahavaratra ary izany dia mpizahatany an'arivony avy amin'ny faritra ...
Dia mamakivaky an'i Provence: Ny lalan'ny lavender
Provence dia tamin'ny andro taloha, iray amin'ireo faritany tian'i Roma. Feno akanjo vaovao manamarina ny ...
Ny morontsiraka tsara indrindra any Costa Rica
Iray amin'ireo toerana fizahan-tany mahafinaritra any Karaiba i Costa Rica, firenena izay manana 1200 km mahery ...
Playa Luna: ny morontsiraka nudist malaza indrindra ao Chile
Chili dia niavaka hatrany ho firenena izay misokatra kokoa amin'ny fironana isan-karazany izay ...
Ireo ramanavy any Austin, Texas
Any Austin, Texas, dia miaina eo anelanelan'ny volana martsa sy novambra ny vondrom-piarahamonina an-tanandehibe lehibe indrindra eto amin'ny tontolon'ny ramanavy, izay mivoaka isan'alina mba hitady bibikely
Ny lalan'ny Castles mamaky an'i Guadalajara, Espana
Raha tianao be ny lapa medieval ary mikasa ny hitsidika an'i Espana ianao dia tsidiho ny faritra Castilla-La Mancha amin'ny ...
Vampire Café any Ginza, Tokyo
Ao amin'ny faritr'i Ginza any Tokyo, misy toerana mihoa-pampana sy mampatahotra, na dia ho an'ny tanàna be loatra sy zavatra tsy mampino toa ny renivohitr'i Japon aza. Miresaka momba ny Vampire Café izahay, trano fisakafoanana gothic voaravaka hazo fijaliana, karan-doha, vatokely, hazo afovoany izay manana ny vatam-paty an'ny Count Dracula mihitsy.
Piramidan'i Teotihuacán: Ny lasa Mesoamerikana any Mexico
Mikasa ny ho any Mexico? Raha te hahalala ny tantaram-pirenena taloha ianao dia aza misalasala mitsidika ...
Riandranon'i Chamarel sy ny tany misy loko 7 any Maurice
Amin'ity indray mitoraka ity dia handeha hitsidika ny Nosy Maorisy izahay hijery ny Chamarel Falls sy ny Land of the ...
Katedraly Wells, Gothic any Angletera
Raha misy fomba maritrano izay tena tiako dia Gothic. Tsy hanao trano aho anio ...
Firenena mitsidika indrindra any Moyen Orient
Mahazo mpizahatany manodidina ny 60 tapitrisa isan-taona ny faritra Moyen Orient. Te hahafantatra ve ianao hoe iza no tena ...
The View, trano fisakafoanana mihodina
Ao amin'ny Hotel Marriott Marquis, ao amin'ny Times Square, no ahitanao ny The View, ilay hany trano fisakafoanana mihodina ao New York
'Caminos' vondrona sary sokitra hafahafa avy any Fuerteventura
Ny rond point izay eo akaikin'ny morontsirak'i Gaviotas, eo amin'ny saikinosy Jandía (Fuerteventura) dia lasa ...
Mandehandeha mamaky ireo honahona any Louisiana, any Etazonia
Fantatsika rehetra ny honahona any atsimon'i Etazonia. Hitanay tamin'ny sarimihetsika tsy tambo isaina izy ireo ary maro hafa amin'ny ...
Sakurajima, volkano mavitrika indrindra any Azia
Sakurajima dia iray amin'ireo volkano mavitrika indrindra any Japon ary angamba izao tontolo izao sy ny tandindon'ny tanànan'i Kagoshima, izay nitolona nandritra ny zato taona ny mponiny teo anelanelan'ny fitiavana sy ny tahotra ilay tendrombohitra lehibe mirehitra. Raha misy volkano velona eto ambonin'ny planeta dia tsy isalasalana fa Sakurajima izany
Ny Great Lake Lake dia ao amin'ny fanjakan'i Utah no iray amin'ireo manintona voajanahary any Etazonia
Ny hatsaran'ny kolontsaina marolafy Papua New Guinea
Ny nosy lehibe faharoa manerantany dia ny nosy New Guinea. Manana velarantany efa ho 800 ...
"La Mano" na "The Man Miposaka Amin'ny Fiainana" dia tsangambaton'ny mpanakanto Shiliana Mario Irrarazábal monina ao Punta del ...
Ny morontsiraka tsara indrindra any Filipina
Fantatrao ve fa i Filipina dia manana ny morontsiraka lava indrindra eto amin'izao tontolo izao? Marina izany, ary raha mitsidika an'i Manila ianao, ...
Tetezana fampiatoana any Etazonia
Androany isika dia hahita tetezana manan-danja sasantsasany any Etazonia. Andao hanomboka ny fitsidihantsika any San Francisco. Mahazo ny anaran'ny ...
Ny toerana manan-danja indrindra sy notsidihina tany Etazonia
Androany izahay dia nanapa-kevitra ny hitsidika ny sasany amin'ireo toerana manan-danja indrindra sy nitsidika ny National Mall & Memorial Parks, izay ...
Toerana voatondro hampiharana ny fizahantany Ethno
Androany izahay dia nanapa-kevitra ny hampihatra fizno-fizahantany. Ny Ethno-fizahantany dia hetsika iray natokana manokana amin'ny fanombanana ny kolontsaina ...
Ny sasany amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Espana
Mipetraka any Amerika Latina ve ianao fa ny raibe sy renibenao dia avy any Espana tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX na ny fiandohan'ny faha-XNUMX? Ianao te…
Fiteny any amin'ny ranomasina Karaiba
Toerana fialan-tsasatra tsara ny Ranomasina Karaiba. Tsy misy fisalasalana, ny morontsiraka mpanjanatany, ny ranomasina, ny tanàna ary ny tanàna. Io dia…
Ny haran-dranomasina, ny sakana lehibe faharoa eto an-tany dia any Belize
Tia haran-dranomasina ve ianao? Omaly fotsiny dia niresaka momba ny haran-dranomasina lehibe indrindra eto an-tany isika, izay azo jerena mihitsy aza ...
Londran'ny renirano manan-danja any Eropa
Ny Old Continent, iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eto an-tany, tsy vitan'ny hoe manana tanàna lehibe maoderina sy manja, fa koa ...
TOERANA FAMPIANARANA -Spanana- (XIX)
ALBARRACÍN (Teruel) (I) Albarracín ho an'ny maro dia iray amin'ireo tanàna mahavariana sy mahafinaritra indrindra eto Espana. Antony nahatonga an'ity ...
Netherlands: voarara ny fivarotana rongony amin'ireo mpizahatany ao amin'ny 'fivarotana kafe'
Ny politikan'ny fandeferana amin'ny zava-mahadomelina dia iray amin'ireo manintona maro izay omen'ny Netherlands ho an'ny mpizahatany, ankoatran'ny ...
Ny Crystal Grottoes of Molinos (Teruel)
Manafina ny iray amin'ireo trangan-javatra voajanahary miavaka indrindra any Eropa ny tsinay. Eo amin'ny toeran'ny ...
Curiosities sy toetra mampiavaka ny firenena
Ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy manokana mampiavaka azy ireo, na mijery izany amin'ny fomba fijery ...
Maorisy, fialantsasatra any paradisa
Mauritius dia manolotra fizahan-tany mahavariana be eo afovoan'ny Ranomasimbe Indianina. Tsy misy isalasalana fa manana trano fandraisam-bahiny mahafinaritra ...
Fialan-tsasatra fahavaratra any ...
Raha mbola tsy nanao vakansy ianao, ary tsy fantatrao izay halehanao dia vintana ianao, satria hitako ny ...
Ny Flavour of Thailand.
Thailand noho ny toe-javatra misy azy, ary ny kolontsain'izy ireo dia nomarihin'i Shina sy India hatrany. Voan'ny fifandraisana ...
Quito, ny Florence of America
Fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Quito ity tanàna tsara tarehy ity, na dia San Francisco de Quito aza no tena anarany. Atsinanana…
Cannes (FRANTSAY): Ny toerana tsara indrindra amin'ny French Riviera
Cannes dia mitovy dika amin'ny sinema, olo-malaza ary rendrarendra. Imbetsaka izy io no nantsoina - tamina fahamarinana - renivohitry ny sinema frantsay, ...
Tsara (FRANTSAY): Ny toerana tsara indrindra any Côte d'Azur
Nomena anarana ho renivohitry ny Côte d'Azur noho ny fitaomana lehibe ara-tantara sy ara-kolontsaina ao amin'ny faritra, Nice ...
Ny monasiteran'i Dafni dia eo akaikin'ny renivohitr'i Gresy, 11 kilometres avaratra andrefan'ny ...
Formentera (NOSY BALEARIKA): Ny morontsiraka tsara indrindra eto amin'ny nosy (IV)
Formentera dia manolotra toerana mety indrindra hankafizanao ireo torapasika mahafinaritra voahodidin'ny tontolo voajanahary voatahiry. Ny morontsirak'i ...
Istria (CROATIA): Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny atsinanana Adriatika (III)
Cvrerni Otoc (Istria) Ity moron-dranomasina ity dia eo akaikin'ny tanànan'i Rovinj, ary fantatra koa amin'ny ...
Istria (CROATIA): Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny atsinanana Adriatika (II)
Istria dia saikinosy miatrika ny Ranomasina Adriatika, izay hita eo amin'ny morontsiraka avaratr'i Kroasia, amin'ny sisintany miaraka amin'ny ...
Fethiye (TURKEY): Ny morontsiraka Tiorka tsara indrindra any Aegean
Ny fitsangatsanganana any Torkia dia sary an-tsaina hatrany ny tanànan'i Istanbul, saingy ity firenena mahafinaritra ity dia misy toerana mahaliana maro azo atolotra, ...
Amerika amin'ny fiara amin'ny làlambe Pan-American
Amerika dia kaontinanta midadasika sy lava ary malalaka ary maro ny mpitsangatsangana manonofinofy hitety azy io amin'ny fiara mandeha ...
PUNTA CANA: Ny toerana mety any Karaiba (III)
Altos del Chavón Iray amin'ireo fitsangatsanganana an-tsitrapo indrindra any Punta Cana ny fitsidihana ny Altos del Chavón, ...
Nosy lehibe indrindra atsy Afrika
I Madagasikara no nosy lehibe indrindra atsy Afrika ary ny fahefatra lehibe indrindra manerantany. Voahodidina tanteraka ...
Toetran'ny toetr'andro ao Lima: Ny toetr'andro ao amin'ny renivohitra Peroviana
Amin'ity indray mitoraka ity dia handeha hizotra ho any Peru isika, firenena iray any Amerika atsimo, fantatra manerantany noho ny fananana iray amin'ireo ...
Karnavaly any anaty ala sy ny morontsirak'i Peroviana
Androany dia ho fantatsika ny fomba amam-panao nentim-paharazana sy malaza an'ny ala Peroviana, hihazakazaka amin'ny Fetiben'ny karnavaly ...
Tanàna sy hotely manintona eran'izao tontolo izao
Misy karazana tanàna eto amin'izao tontolo izao, samy manana ny antsipiriany miloko kokoa noho ny teo aloha….
Azo atao ve ny mandeha any Iràka?
Angamba ho an'ny maro dia lavitra ny fiheverana ny ho any Irak, izany dia vokatry ny andiana tranga ary ...
Valan-javaboary sy tahiry voajanahary ao Alajuela, Costa Rica
Androany isika dia hitsidika ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra any Alajuela, izay heverina ho iray amin'ireo ...
Tempoly sy tsangambato any Alemana
Amin'ity indray mitoraka ity dia handeha ho any Alemana izahay hijery ny sasany amin'ireo tsangambaton'ny marika. Andao atomboka eto an-drenivohitra ny lalantsika ...
Petra, tanànan'ny vato (IIIa)
Nahatratra ny dingana fahatelo tamin'ny fitsidihanay tany Petra izay hahafantarantsika ny gastronomie tsy io ...
Tsangambato manan-tantara manan-danja indrindra any Paris
Sahinao ve ny mitety ireo tany midadasika any Frantsa? Ity firenena Gallic ity dia feno fisarihana tsy tambo isaina ary noho izany antony ...
Moyobamba: Hahafantatra ny ekolojia i Peroa
Iray amin'ireo faritra tsara indrindra amin'ny ala Peroviana, any amin'ny tanànan'i San Martín, no misy azy ...
Pandataria sy ny fasana sambo rendrika azy
Pandataria, fantatra ankehitriny amin'ny hoe Ventotene, dia iray amin'ireo nosy Pontine izay miorina amin'ny Helodrano Gaeta, ao amin'ny Ranomasina ...
Tany efitra Sahara: Toerana itodiana, hetsika ary torohevitra momba ny dia
Tsy misy zavatra mahavariana kokoa noho ny mankafy ny iray amin'ireo toerana fizahan-tany voajanahary miavaka indrindra eto an-tany. Izahay…
Andao hankafy fitsangatsanganana fizahan-tany ara-kolontsaina mahaliana amin'ny alàlan'i Cantabria any Espana. Voalohany indrindra dia mila milaza isika fa i Cantabria dia ...
Afaka mahafantatra firenena na tanàna amin'ny fomba arivo sy iray hafa isika ary mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra dia ny mankany ...
Ny iray amin'ireo dia mahaliana indrindra azonao atao dia ny fahalalana ireo firenena misongadina ao Oseania. On…
Fomba amam-panao sy fomba amam-panao any Russia
Araka ny efa fantatrao, ny firenena tsirairay avy dia samy hafa amin'ny firenena hafa noho ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana, ny mponina ary ny hafa, ary i Russia ...
Fantaro ny lova ara-tantara sy ara-kolotsaina any Ekoatora
Ekoatera dia firenena kely any Amerika izay manana ny zava-drehetra: sokatra goavambe, morontsiraka tsara tarehy nilahatra amoron-dranomasina, ny ...
Krema masoandro ho an'ny alika sy saka
Mena, erythema, dermatitis ary fivontosana, mandoro saka sy alika koa ny masoandro. Izany no nahaterahan'ny tsipika ...
Vanuatu, ilay firenena falifaly (III)
Manomboka ny fizarana fahatelo amin'ny lalanay amin'ity toerana mahafinaritra ity izahay ary amin'ity indray mitoraka ity dia hahafantatra ny sasany amin'ny ...
Jereo ny toerana manintona indrindra any Chicago (2)
Ny masoivohom-pitetezana rehetra manampahaizana manokana amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena dia manondro an'i Chicago ho iray amin'ireo toerana irina indrindra ao ...
Ajanony ny fiovan'ny toetrandro
Impiry isika no naheno momba ny fiovan'ny toetrandro? Azo antoka fa ampolony, an-jatony na an'arivony, fa ... manao zavatra ve isika ...
Amazon sy Mississippi, renirano amerikana lehibe
Fantatrao ve fa ny Reniranon'i Amazon dia iray amin'ireo lava indrindra eto an-tany? Raha misalasala ianao mandra-pahoviana ...
Teotihuacan sy Chichén Itzá: Fizahan-tany arkeolojika any Mexico
Te fizahantany arkeolojika any Amerika Afovoany ve ianao? Ka maninona ianao no sahy mitsidika ny Piramidan'i Teotihuacan sy Chichén Itzá any Mexico? ...
Haiti: Magic mainty any Karaiba
Rehefa manonona an'i Haiti, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao dia ny firenena tena mahantra sy lao ary iray ...
The Great Wall of China: Inona izany ary aiza no misy azy?
Ny Great Wall of China no anarana nomena ny rindrina sy ny andiana manda miorina hiarovana ny ...
Nervión: iray amin'ireo renirano manan-danja indrindra any Espana
Eo afovoan'ny Saikinosy Iberia ianao dia afaka mahita ny Reniranon'i Nervión mandalo ny faritra avaratry ny faritany Espaniola manontolo ...
Turkménistan: Curiosities sy manintona mpizahatany
Saika rakotry ny iray amin'ireo tany efitra lehibe indrindra manerantany i Turkménistan, ny Desert of ...
Wales, zava-misy mahaliana
Wales dia toerana feno fahalianana sy zava-misy mahaliana. Miaraha aminay amin'ity tatitra mahafinaritra ity izay azo antoka fa tsy hiteny ianao….
CN Tower, haavo any Toronto
Ny iray amin'ireo tandindon'i Kanada ary manokana ny tanànan'i Toronto dia ny tilikambony avo. Afaka mahita ...
Ireo valan-javaboary 20 tokony hotsidihinao any Miami (Fizarana fahadimy)
sary nalaina: jlcwalker West Lake Park dia fantatra amin'ny anarana hoe "natiora", ny anarany dia noho ny làlany an-tongotra…
Mampiavaka an'i Gresy ny hatsaran-tarehiny sy ny toeran'ireo mpizahatany tsy hita isa ao aminy. Anisan’ireny ny ...
Ny iray amin'ireo lafiny malaza indrindra amin'ny Italiana dia ny toetrany, mafana fo izy ireo ary tena maneho hevitra. Olona izy ireo…
Vahoaka Zulu: Fizahan-tany etnografia any Afrika
Misy karazana fizahantany maro izay mifanaraka amin'ny tsiro isan-karazany an'ny mpizahatany. Amin'ity indray mitoraka ity dia handeha ho any Afrika ...
Rivers of Africa: onja voajanahary amin'ny kaontinanta mainty
Ny reniranon'i Afrika lehibe dia i Neily, izay mitazona ny firaketana ho an'ny renirano faharoa lava indrindra eto an-tany. Teraka tany…
Desert any Amerika Avaratra: Wastelands be
Ny faritany midadasika any Amerika Avaratra dia misy habaka voajanahary lehibe, izay manasongadina ny jeografia terrestrial an'ny ...
Bruxelles dia renivohitr'i Belzika, tanàna nostalgia izay mampifangaro tsara ny lovany ara-tantara be indrindra amin'ny ankamaroan'ny ...
Manohy ny dianay izahay ary hijanona any Eropa, amin'ity indray mitoraka ity dia hihaona amin'ny iray amin'ireo ...
Discos, club ary bara tsara indrindra any Azia (Fizarana 1)
Ara-dalàna raha mieritreritra ny hanao dia any Azia isika, fitsidihana ireo mausoleum, kolontsaina taloha, fizahan-tany ...
Pacasmayo: morontsiraka, fomba amam-panao ary onja
Ny jeografia an'i Peroa dia toy ny thermometer, ny avo kokoa, any avaratra, ny tontolo iainana mafana, omena ...
Fitaterana ao Lima
Ny tanànan'i Lima dia mifandray amin'ny sisa amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny Central Highway sy ny lalambe Pan-American. Hatramin'ny…
Playalinda, morontsiraka nudist any Florida
Raha ny fanatrehantsika ny torapasika nudist quintessential any Florida no tadiavintsika, dia tsy maintsy mankany Playalinda isika. sary…
Ny morontsirak'i Cassis, fasika ary disko amin'ny toerana iray ihany
Ireo morontsiraka ireo dia any atsimo atsinanan'i Frantsa akaikin'ny Marseille fanta-daza sy be mpitsidika. Ny morontsirak'ity ...
Mall of America: iray amin'ireo ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra any Etazonia
Ny Mall of America, fantatra ihany koa amin'ny hoe MOA, Moa na Megamall, dia ivontoerana miantsena lehibe miorina ao amin'ny ...
Ranomasina any Pernambuco, Fernando de Noronha (II)
Manohy ny morontsiraka mahafinaritra an'i Fernando de Noronha: Playa del Boldró Io no iray amin'ireo be mpivezivezy indrindra koa, ...
Fiantsenana zaza any New York
Tsy ny zava-drehetra dia vita amin'ny beton ao anaty trano ambony ary ny vy ao amin'ny tetezana ao an-tanàna, New York koa dia mampihetsika antsika ...
Tsy misy zatovo mankaleo any New York
Miaina ny fahalalahana sy ny fahavelomana any New York, tanàna mety tsara hitsidihan'ny tanora te hiala voly ary gaga amin'ny ...
Sakafo mahazatra an'i Albania
Ho an'ireo izay tsy mahalala Albania dia repoblika any atsimo atsinanan'i Eropa. Manodidina an'i Montenegro any avaratra, ny Repoblika ...
Fiantsenana any Shina: ny tsenan'i Shanghai (Fizarana 2)
Mahafantatra hatrany ny tsenan'ny Shanghai izahay ary mahita an'i Shanghai Longhua. Tsena ahafahanao mahita akanjo ...
Fiantsenana any Shina: ny tsenan'i Shanghai (Fizarana 1)
Iza no tsy tia miantsena? Ny valiny dia tsy isalasalana fa ny rehetra. Amin'ity indray mitoraka ity ...
Safidy snorkeling sy antsitrika tsara indrindra any Puerto Rico
Raha mieritreritra ny handany fialan-tsasatra any Puerto Rico ianao dia mamporisika anao tsy hitsahatra amin'ny snorkeling sy ny antsitrika….
Russia, lova ara-tantara sy kolontsaina
Russia or the Russian Federation comprises most of East Europe and part of North Asia. Lehibe…
Fetibe sy fomban-drazana any Bulgaria
nahazoan-tsary: ​​benkamorvan Ny kalandrie orthodoksa Bulgaria dia manan-karena amin'ny festival. Ny fombafomba sy ny fety avy amin'ny mpanompo sampy dia mifanitsy ao ...
Tempolin'ny rahona fotsy mifono mistery
Ny Temple of the Cloud Cloud, any Shina, dia miorina eo amin'ny sisin'ny Xibianmen, any Beijing. Iray ity…
Aiza no hiantsenana any Boston sy ny manodidina
Boston dia manolotra toerana maromaro hiantsenana, ahafahanao mahita akanjo ho an'ny tsiro rehetra sy ny vidiny samihafa ho an'ny rehetra ...
Ny ivon-toeram-pivarotana tsara indrindra dia any Queens
Ny ivontoeran'ny mpanjaka dia manana ivon-toeram-pivarotana lehibe, izay ahitanao fivarotana maro isan-karazany hanaovana ny fividianana azy mifanaraka amin'izany….
Klub & bara pelaka tsara indrindra any Bangkok
Vantany vao manana hevitra ankapobeny momba ny Sehatra pelaka any Bangkok ianao, dia vonona ny hanapa-kevitra amin'izay toerana ...
The Sorbonne: ny Oniversiten'i Paris
sary indramina: carlos_seo Ny teny hoe Sorbonne (amin'ny teny frantsay La Sorbonne) dia matetika ampiasaina hilazana ny oniversite manan-tantara…
Inona no hohanina any Puerto Rico?
Ny gastr gastric marina any Puerto Rico, ny sakafo kreôla, dia miorina amin'ny akora roa tena ilaina dia ny akondro ...
Ny sary sokitra any India, akanjo manerantany
sary: ​​blaiq sary vongana taloha dia vita tamin'ny vato, tanimanga, ivoara, varahina ary volamena. Ao amin'ny lohasahan'ny ...
Ny fisotroana sy fihinanana tsara an'i Chiang Rai
Araka ny efa fantatrao, Chiang Rai no faritany farany avaratry Thailand, ary misy ...
Torapasika Bahrain: toeran-kafa any amin'ny Golfa Persia
Raha mieritreritra ianao fa tonga ny fotoana hiainana fialan-tsasatra hafa, any amin'ny toerana any an-danitra, any ivelany misy kolontsaina ...
Ny morontsiraka tsara indrindra any Venezoela
Te hiala sasatra sy hanelingelina ny tenanao ve ianao? Raha manamafy ny valiny dia tsy azonao atao ny mijanona tsy mandeha amin'ireo tora-pasika samihafa any Venezoela ...
Toeram-pisakafoanana ambony 5 any Singapore
1.- Flutes ao amin'ny Fort: trano fisakafoanana feno fitiavana sy vanim-potoana fanjanahana ity. Ho tianao ny hahafantatra ...
Ile Du Levant, toerana niberena voalohany tany Frantsa
Ile du Levant, indraindray antsoina hoe Le Levant, dia nosy Mediterane frantsay, eo amoron'ny morontsiraka ...
Fiainana alina any Cebu, Filipina
Nolazainay hatrany fa tsy feno ny dia iray raha tsy fantatsika ny fiainam-piainan'io toerana io, sa tsy izany? Marina ny anao…
Fashion, fivarotana fitafiana ary fiantsenana any Thailand
Ankehitriny ny tontolon'ny lamaody any Thailand dia niova sy nahaliana olona mihoatra ny iray….
Tempolin'i Sri Mahamariamman any Kuala Lumpur
Marina fa ny iray amin'ny ody fijerena fizahan-tany amin'ireo tanànan'ny Aziatika dia ireo tempoliny taloha sy mistery….
Ny morontsiraka tsara indrindra any Bonaire
Ny morontsirak'i Bonaire dia manolotra karazana fasika fotsy sy mavokely ary mainty. Matetika ny fasika dia feno ...
Ny morontsiraka avaratr'i Curaçao
Ny morontsirak'i Curaçao no tsiambaratelo nafenina indrindra amin'ny nosy. Ireto dia morontsiraka kely, akaiky, mitokana ary ...
Kastily Neuschwanstein, Bavaria, Alemana. Tranon'i Sleeping Beauty
Any amin'ny faritra Alemanina ao Fuessen, any Bavaria, dia nasaina namboarin'ny Mpanjaka LouisII tamin'ny 1866, miaraka amin'ny roa ...
Ny morontsirak'i Menorca
Manararaotra ny fialantsasatra ananantsika teo akaiky teo, ary raha tsara ny toetr'andro, safidy tena tsara ...
Ny trano fandraisam-bahiny tsara indrindra any Etazonia
Eto izahay mitondra anao ny lisitr'ireo hotely lafo vidy 10 tsara indrindra any Etazonia araka ny tranonkala malaza ...
Morontsiraka Nassau tsara indrindra any Bahamas
I Bahamas dia fantatra eran'izao tontolo izao amin'ny morontsiraka mampino azy. Izany no antony anoloranay anao ny lisitry ny morontsiraka tsara indrindra ...
Bara, trano fisakafoanana ary trano fandihizana amin'ny Acapulco.
Acapulco dia ivon-toeram-pizahantany sy fialan-tsasatra nalaza indrindra hatramin'ny taona XNUMX, ka tamin'ny ...
Ny zava-drehetra momba ny Nosy Mafia any Tanzania
Mafia Island dia ampahany amin'ny nosy masiaka ao Tanzania, miaraka amin'i Zanzibar sy Bemba. Anisan'ny ...
Hotely 5 ambony any Curaçao
1.- Avila Beach Hotel dia orinasam-pianakaviana ny Avila Beach Hotel, izay manan-tantara bebe kokoa ...
Hotely 3 lehibe any Aruba
Manana hotely isan-karazany i Aruba, izay mety hanasarotra ny safidinao; ka manome anao izahay ...
Ny zava-drehetra momba an'i Bahamas
Mahaliana foana ny fahalalana zava-misy mahaliana momba ny toerana izay hitsidihantsika. Izany no antony nanomananay ny zava-drehetra ho anao ...
Lima, tanànan'ny mpanjaka (VI) famaranana
Dingana farany tao an-tanànan'ny mpanjaka, rehefa nahalala ny tantarany, ny fomban-drazana, ny fomba amam-panao, ny gastronomy, ny tranombakoka, ny toerana misy ...
Toerana 10 tsy tokony halainao any Havana, Cuba
I Cuba dia iray amin'ireo toerana tiako satria mampifangaro ny morontsiraka sy ny kolontsaina izy ireo. Rehefa mandeha any Kiobà ianao, ho fanampin'ny ...
Ilay Nosy Man tsy fantatra
Any amin'ny Ranomasina Irlandy, eo anelanelan'ny Angletera, Scotland, Wales ary Irlandy, dia faritany miankina amin'ny satroboninahitry ny Britanika, ...
Monaco, firenena mihaja
Taorian'i Vatican, i Monaco no firenena faharoa kely indrindra eran'izao tontolo izao, ary mifanohitra amin'izany no voalohany amin'ny hakitroky ny mponina….
Las Vegas, "ny tanànan'ny ota" (III)
Tonga amin'ny ampahany manan-danja amin'ny dianay izahay isaky ny dia, ny sakafo eo an-toerana. Tena tsy mahalala ny firenena manontolo ...
Ny morontsiraka miboridana 10 tsara indrindra eto an-tany
Ny morontsiraka miboridana 10 tsara indrindra eran-tany, hoy ny GoNOMAD.com. Ny lisitry dia mifehy hatrany (ekena ny soso-kevitra, inona ny ...
Ireo trano fandraisam-bahiny sy hotely tsara indrindra 10 any Maurice
Mark Twain dia nanoratra fa i Maorisy dia natao voalohany ary avy eo dia tahaka ny endriny no nahariana ny lanitra. TO…
Tokyo, "ny fanjakan'ny microchip" (IIIa)
Midira tanteraka amin'ny lahatsoratra iray hafa aho fa hizara roa aho satria ny sakafo Japoney dia tena ...
Ny tsara indrindra amin'ny Corfu ao anatin'ny 4 andro
Ny fomba haingana indrindra hahatongavana any Corfu dia avy any Atena, misy fifandraisana an-habakabaka maromaro isan'andro. Ny safidy tsara indrindra amin'ny ...
Ny fiangonana nankalazana ny lamesa katolika voalohany
Ny finoana malaza dia nilaza fa ny lamesa katolika voalohany dia nankalazaina tany Santa Maria any Trastevere, any Roma. Ity fiangonana ...
Saigon ho an'ny vao manomboka 1: mivoaka hisotro toaka.
Saigon dia nanan-daza tamin'ny fiainana alina velona. Ary na ny kaominista aza rehefa novainy ho Ho ...
Langkawi, toerana tora-pasika tena malaza any Malezia
«Nosy i Nosiposy misy nosy 99 ao amin'ny Ranomasina Andaman avaratra atsinanan'i Malezia, saika eo amin'ny sisintany ...
Ny morontsiraka malaza tsy fantatra any Cuba: Santa María del Mar
Rehefa mieritreritra morontsiraka any Kiobà isika, ny zavatra voalohany eritreretintsika dia ny moron-dranomasin'i Varadero. Saingy i Cuba dia manana ...
Ny tsara indrindra any Santorini ao anatin'ny 4 andro
Thira, renivohitra, angamba no tanàna tsara indrindra sy tsy manam-paharoa ao Aegean. Izy io dia miorina ary tsy jerena ny ...
Ranomasina, gidro ary tendrombohitra any Bohol, Filipina
Raha mikasa ny ho any Filipina ianao, dia toerana iray tsy azonao adino i Bohol. Bohol ...
Ireo zava-mahatalanjona voajanahary ao Jamaika
Jamaica, ankoatry ny morontsiraka mahafinaritra, dia misy ihany koa ny endrika voajanahary izay tsy maintsy ilaina. Anisan’ireny ny: ...
Torolàlana azo ampiharina Curacao
Ny toerana Curaçao dia eo atsimo andrefan'ny Karaiba, amin'ny latitude 12 ° avaratra ary longitude 68 andrefana. Ny…
Mpanjaitra tsara indrindra any Bangkok: mpitafy akanjo Rajawongse
Araka ny noresahantsika tamin'ny lahatsoratra iray hafa (Manao akanjo any Azia) dia mpandeha maro no manapa-kevitra ny hanao palitao na akanjo vitsivitsy ...
Sakafo fisakafoanana kaiseki ao Gion, distrikan'ny gheisha any Kyoto
Iray amin'ireo zavatra niainana tena mahaliana amin'ity dia ity ny fisakafoanana hariva toa an'i Kaiseki tao Gion, ny manodidina…
Ireo hotely 10 ratsy indrindra any Cancun
Ireto ny hotely 10 ratsy indrindra any Cancun raha ny filazan'ny mpisera TripAdvisor dia ireto manaraka ireto: Aristos Cancun Plaza Hotel, «mahatsiravina ary…
Fiantsenana any Singapaoro
Raha mbola tsy nankany Asia ianao dia Singapore no iray amin'ireo safidy tsara hanombohana azy. Tsy hoe satria nanomboka ...
Ny ala tropikaly antitra indrindra eto an-tany: Taman Negara
Tsy misy zavatra hafa tsy kely akory, mihoatra ny 130 tapitrisa taona, tombanana fa ny ala tropikaly Taman Negara dia ...